AMBANJA : Nosokafan’ny manampahefana omaly ny fotoam-piotazana lavanila
Nosokafana omaly tamin’ny fomba ofisialy ny fotoam-piotazana lavanila tao amin’ny fokontany Andimaka Ankifigny ao amin’ny faritra ambanin’i Sambirano. 22 mai 2020
Faritra izay mamokatra lavanila tsara kalitao indrindra hatreto. Vinavinaina ho maherin’ny 9 taonina ny lavanila vokarin’ny tantsaha ao Ambohimena.
Ny tsy fandriampahalemana sy ny halatra lavanila no mampitaraina ny tantsaha any amin’ny faritra Sambirano. Nanome toky ny prefen’Antsiranana izay nanome voninahitra ny lanonana fa handray andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny olana mianjady amin’ireo tantsaha mpamokatra. Anio indray dia anjaran’ Ambanja ka any Ambalavelona no hanaovana ny lanonana entina manamarika ny fanombohan’ny fotoam-piotazana. Tsy latsaky ny 25 taonina ny vokatra lavanila azo ao an-toerana.
Ankoatra ny prefen’ Antsiranana nahitana manam-pahefana maro hafa nanome voninahitra ny lanonana tao Andimaka Ankifigny, omaly. Anisan’izany ny Sekretera jeneralin’ny faritra Diana izay misahana vonjimaika ny andraikitry ny lehiben’ny faritra Malaza Ramanamahafahay. Iaraha-mahafantatra anefa fa nofoanana nandritra ny filankevitry ny Minisitry tamin’ny alahady teo ny didim-panjakana manendry ny Sekretera jeneralin’ny Faritra Diana. Noho izany tsy vitsy ireo olona tany an-toerana talanjona nahita azy nandray fitenenana. Nilaza aza ireo namana mpanao gazety sasany fa nanahirana azy ireo ny fihetsik’ity tompon’andraikitra ity. « Tsy hay intsony ny tena marina. Amin’ny maha Sekretera jeneraly azy araka ny fahafantarako azy no nanendrena azy hisahana vonjimaika ny toeran’ny lehiben’ny faritra Diana. Fa araka ny fanazavan’ity farany kosa tsy misy fifandraisana amin’ny maha lehiben’ny faritra azy hono ilay didim-panjakana nivoaka ny alahady teo izay manafoana ny didim-panjakana nanendrena azy ho Sekretera jeneraly », hoy raim-pianakaviana iray tafaresaka tamin’ny mpanao gazetinay. Izay tokoa ve ny tena marina ? Mifamaofao ny resaka. Mitaky fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Minisiteran’ny Atitany izany rehetra izany.
Fa araka ny hevitry ny mpanara-baovao maro any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy dia foana miaraka amin’ny didim-panjakana nivoaka ny alahady teo ny didy nanendry azy ho lehiben’ny faritra Diana vonjimaika. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray miara-miasa amin’ingahy lehiben’ny faritra Diana vonjimaika dia nanamarina ny tenin’ity farany ny amin’ny mampijanona azy amin’ny toeran’ny lehiben’ny faritra Diana vonjimaika hono ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Atitany rehefa nanotaniana momba iny didim-panjakana nivoaka tamin’ny alahady teo.
Ho hitantsika eo ihany ny tena marina satria misy ny mandika lalàna amin’izay hitivany azy rehefa ahitany tombontsoa.